IPhone 7 na iPhone 7 Plus Hụrụ Ọzọ na Leaked Images | Akụkọ akụrụngwa
The iPhone 7 na iPhone 7 Plus Hụrụ Ọzọ na Leaked Images
Na ụzọ doro anya, enweghị ike ịsị na foto ndị a anyị ga-ahụ n'isiokwu a bụ nke iPhone, mana enwere ọtụtụ foto na ntaneti iji kwenye na Apple iPhone ọhụrụ, iPhone 7 na iPhone 7 Plus ha agaghị enwe ụdị a.
N'ezie, ndị a bụ foto ndị yiri nke ahụ anyị ahụlarị na asịrị ndị gara aga na ndị ọzọ, mana ogo nke foto atọ a dị elu ma n'ime ha ị ga-ahụ ma ihu na azụ nke iPhone ọhụrụ ahụ. N'ihe banyere ụdị Plus ma ọ bụ Pro igwefoto abụọ bụ ihe doro anya doro anya na azụ, ma ị nwekwara ike ịhụ otú ahịrị antenna ndị ahụ dị na nsọtụ nke ngwaọrụ ahụ.
Ihe onyonyo ndị a sitere na Macrumors na-egosi anyị ngwaọrụ abụọ na agba ọla edo dị ka iPhone 7 ọhụrụ ahụ ma eziokwu ahụ bụ na ịhụ ihe onyonyo ndị a enweghị ike ikwu ọtụtụ, iPhone ọhụrụ ahụ ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu akụkụ ahụ dịka ụdị iPhone ugbu a, iPhone 6 na 6 gbakwunyere. O doro anya na ime ga-adị nnọọ iche na ma ụdị ma nke a, nke ibido na-emebeghị na Apple tupu (afọ atọ na otu ma ọ bụ yiri ụdị na usoro nke imewe) nwere ike ịbụ definitive maka afọ a. The ọhụrụ iPhones ga tinye dị iche iche esịtidem ngwaike nhọrọ ugbu a iPhone, ma Anyị anaghị ahụ njikọ njikọ Smart na mgbakwunye Plus ma ọ gaghị ekwe omume ịhụ ma ọ nwere jaak 3,5 mm maka ekweisi., yabụ na-ahụkwu asịrị.
Ee, izu ndị a ga-abụ ozi ọhụrụ iPhone ọhụrụ na ikekwe ọhụrụ MacBook Pro na nwekwara ike ọkọnọ esote September 7 nke bụ ụbọchị nke Mark Gurman kwadoro na Bloomberg na a ga-ahọrọ ya maka isi okwu Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » The iPhone 7 na iPhone 7 Plus Hụrụ Ọzọ na Leaked Images
Teknụzụ ise ga - ebili na 2016 niile
Samsung's Exynos 8895 processor nwere ike ịgba ọsọ na 4 GHz